Taliska Ciidanka Booliska oo sheegay in 23 Askari loo xiray arrimo Musuq-maasuq la Xiriira. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliska Ciidanka Booliska oo sheegay in 23 Askari loo xiray arrimo Musuq-maasuq...
Taliska Ciidanka Booliska oo sheegay in 23 Askari loo xiray arrimo Musuq-maasuq la Xiriira.
Muqdisho (SNTV)- Taliye Ku-xiggeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Zakia Xuseen Axmed oo maanta shir jaraa’id ku qabatay Xarunta Taliska Booliska ayaa Warbaahinta uga warbixisay Howlgalada ka socda magaaladda Muqdisho, kuwaasi oo lagu sugayo Ammaanka Caasimada.
Gen. Zakia ayaa sheegtay in Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya qeybaha kale duwan ee Hay’addaha Ammaanka ay wadaan Howlgallo Qorsheysan oo lagu baadi goobayo Argagixisada arxanka darran ee Alshabaab iyo Cid walbo oo Nabadda Khatar ku ah.
Ugu dambeyn Gen. Zakia ayaa qeybaha kala duwan ee Bulshadda Soomaaliyeed waxay ugu baaqday inay u hoggaansamaan Sharciga, islamarkaana ay la shaqeeyaan Booliska, si looga hor-taggo dhagarta Cadowga Argagixisada Alshabaab ay u maleegayaan Shacabka.
Previous articleWiil uu dhalay Ex-Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo Golaha Shacabka ka mid noqday
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo casho sharaf hoygiisa ugu sameeyay Madaxwaynaha Jubaland